December | 2016 | HimiloNetwork
Dalxiisayaal lagu qabsay inay qaadaan boor lagu qoray: ‘Waxaan nahay tuugo’ kadib..
Zakariya December 29, 2016	Leave a comment 249 Views
Jakarta (Himilonews) – Laba dalxiisayaal oo ku sugan dalka Induniisiya kuwaas oo lagu qabtay xatooyada laba bushkuleeti ayaa lagu qasbay inay waddooyinka la maraan boorar lagu bahdilayo, marka loo eego muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada. Guddoonka degmada Gili ayaa xaqiijiyay in labadan dalxiisayaal oo jira da’da 20 kana yimid dalka Australia, kuwaas oo la heyb sheegin magacyadooda, in kaamirada qarsoon ...
Marka dhaqanku geeri u horseedo nolosha qofkiisa – aqriso qiso gaaban.
Zakariya December 29, 2016	Leave a comment 171 Views
Kathmandu (Himilonews) – Gashaanti 15-jir ah oo ku nool dalka Nepal ayaa geeriyootay kadib markii waalidkeedu ku qasbeen inay gaar u jiifsato aqal Hoori – halkaas oo oksijiin yari awgeed ay naftu uga baxday. Waxa ugu weyn ee gabadhani loogu qasbay inay meel gaar ah seexato ayaa ah iyada oo qabtay dhiigga dumarka bishii kol ku dhaca ee loo yaqaan ...
Zakariya December 29, 2016	Leave a comment 373 Views
Muqdisho (Himilonews) – Diyaarad qaadkeedu dhan yahay 200 oo rakaab ah oo siday 172 rakaab kana timid New York kuna sii jeeday Fransiiska ayaa sameysay degis degdeg ah kadib markii musqusheeda la furi waayay. U hadle u hadlay Open Skies, oo leh diyaaradda British Airways ayaa sheegay in duulimaadka diyaaradan loo weeciyay Ireland kadib markii la ogaaday in rakaabku ay dooni ...
Zakariya December 29, 2016	Leave a comment 277 Views
Muqdisho (Himilonews) – Cunug yar ayaa dhimatay kadib markii hooyadeed ay kaligeed kaga tagtay gurigeeda iyada oo aaday baar lagu caweeyo habeenkii, marka loo eego booliska dalka South Africa. Booliska Johannesburg ayaa sheegay inay xireen haweeney 26-jir ah oo aan la heyb-sheegin magaceeda kadib markii cunugteeda 3 bilood jirta ahayd ay nolosha ku cuneen raxan Jiir ama Doolli ah. Haweeneyda ...
Zakariya December 27, 2016	Leave a comment 182 Views
Bangkok, Thailand (Himilonews) – Beeraleyda saboolka ah ee ku nool dalka Thailand hadda waxay awoodi doonaan inay carruurta geystaan kuleej kadib markii hal jaamacad oo si gaar ah loo leeyaahay ay aqbashay in beeraleydu carruurtooda jaamacadda uga bixiyaan bariis -badalkii ay bixin lahaayeen lacag caddaan ah. U hadlaha jaamacadda Rangsit University ayaa sheegay in ardaydu hadda kadib ku bixin karaan dhamaan ...
Zakariya December 26, 2016	Leave a comment 240 Views
Texas, USA (Himilonews) – Lamaane ku sugan gobalka Texas ee Maraykanka ayaa ugu danbeyn guri u wada hoyday kadib markay wada sheekeysanayeen muddo 41 sanadood ah. Bill iyo Linda Bownds ayaa is bartay sanadkii 1975-kii markii ay kala jireen 31 jir iyo 30 jir. Waxay si jaceyl ku dheehan yahay iskula joog jireen taniyo markaas. Hadda wada qaadashada muddo 41 sanadood ...
Zakariya December 25, 2016	Leave a comment 213 Views
Pune, India (Himilonews) – Dr. Ganesh Rakh wuxuu ugu yeeraa biirin cusub oo ku aadan kor u qaadista tirada dhalmada dhallaanka dhedigta ah gudaha dal caadooyinka dhaqameed ee dadyowgiisu aaminsan yihiin in liic kusii wado tirada gabdhaha oo aad uga sii yaraaneysa marka lala barbar-dhigo tirada wiilasha dhalanaya. Sanadkii 1961, 976-dii gabdhood oo da’da 7-jirka ka hooseeyaba 1000 ayaa u ...
Kaalinta nalalka ileyska qoraxda ku shaqeeya iyo daryeel la’aanta heysata
Zakariya December 25, 2016	Leave a comment 462 Views
Muqdisho (Himilonews) – “Hilible ayan ahay: waxana iga saaciday nalalka habeenkii inaan halkan ku ganacsado: masha Allah, faa’iido waaweyn ayaan ku qabaa.” Faalladaas waxaa tiraabaya Salaad Cali Fiidow oo si joogta ah habeen kasta, waddo iftiin badan oo ku dherersan mid kamid ah laamiyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ku iibiya hilibka. Wuxuu shaqada uu subaxii hore soo bilaabo ka hoydaa ...
Khubaro Sucuudiyan iyo Ukrain isugu jira oo sameeyey diyaarad dagaal
Zakariya December 25, 2016	Leave a comment 189 Views
Kiev (Himilonews) – Sawirkii ugu horreeyey ee diyaarad dagaal oo ay wadajir u wada sameeyeen dalalka Sucuudiga iyo Ukraine ayaa lagu soo ban-dhigay gudaha warshad sameysa oo ku taalla dalkaas. Shirkadda Antanov, oo ah mid dowladdu leedahay, ahna shirkadda kaliya ee sameysa baabuurta iyo diyuuradaha ayaa soo ban-dhigtay sawiradda diyaaradan cusub, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka dalkaas ee UNIAN. ...
Zakariya December 25, 2016	Leave a comment 247 Views
Ausberg (Himilonews) – Ku dhawaad 54,000 oo qoysas Jarmal u dhashay ayaa lagu wadaa in laga daad gureeyo guryahooda xilliga ciidda Kirismaska kadib markii bam ka yimid dagaalkii labaad ee dunida lagu arkay magaalada ay deganaayeen. Bamka lidka diyaaradaha loo adeegsado oo culeyskiisu dhan yahay 1.8 ton ayaa laga helay magaalada Augsburg ee dalkaas, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AP. Howsha ...
Buundada Sky Bridge ee Malaysia
03 Decemeber – Maalinta Caalamiga ee Naafada.